Xaalada cadaw ee markaasi ku hareeraysnayd Qaybtan kamidka ah CWXO ee fulinaya hawlgalka Cirjiidh ee ku sugnaa deegaankan Cadalay amaba Xudur ayle markaan intaasi kaga tago sawirka guud een idinka siiyay, waxay ciidankii N/hurayaasha ka difaac qaateen ciidanka cadawga iyagoo wakhtigaasi ku sugnaa laagta caanka ah ee Cadalay. Laagtani waa dhul kooban oo aan baladhkeedu kabadanayn700 metersbalse waxay leedahay dherar kayntu (dhirtu) iyo beeruhu ku badantahay.
Waxaan bartaasi difaac ka xidhanay amin duhur ah waxaananu ku jirnay difaacaasi ilaa iyo salaadii Maqrib. Taliska falaadhani waxay ku mashquulsanaayeen soo uruurinta xogta dhabta ah ee cadawga, mida deegaanka iyo waliba soo saarida qorshihii dagaal ee lagaga hortagi lahaa cadawga isasoo urursaday.
Amin fiidnimo ah oo salaadii maqrib aanu tukanay ayaan waxaanu ka dareernay difaacanagii waxaananu dib u qaadnay raadkii aan saakay soo marnay marka aanu marayno deegaanka Dhuurta. Waxaan isu rognay dhanka iyo tuulada Maracato. Waxanu gaadhany tuladaasi saacado kadib oo fiid-danbe ah waxaananu ka sii qaadanay sahay iyo wixii xog ahayd ee uu wakhtigaasi u baahnaa sahankii CWXO.
Qorshaha aanu ku socono wakhtigani waa shax ay dajisteen taliska ciidankayaga iyo sahanka CWXO ee nalasocda. Wuxuuna qorshuhu ku salaysnaa in aanu ka dhexbaxno shabagan ay ciidamdada gumaysiga Itobiya noo dhigteen. Nasiib wanaag waanu ku guulaysanay in aanu si qorshaysan ku jarno shabagan, ciidankii gumaysga wayaanahana aan ku ridno niyadjab, rafaad iyo jahawareer, aan marnaba quluubtoodu ilaawaynin. Waxaa laga sheegay sargaalkii watay ciidamada Wayaanaha markuu ogaaday in aan ka baxnay shabakadii uu dhigay inuu yidhi xagay mareen? Ma cirkay jiidheen? Hawlgalkan Cirjiidh sidaasuu kula baxay horta. Xogtii aan ka helnay cadawga ee Taaktiigyadii aan qaadnay ay sabab u noqotay waxaa ka mid ahaa in ciidamadii cadawga is khilaafeen oo ay kala jabeen, qaarkoodna waabay isdileen, halka kuwa kalena ay ka baxsadeen. Ciidamadii cadawga badankoodu waxay ku noqdeen xeryihii ay ka soo kicitimeen iyadoo is-qabqabsi badani ay dhextaalo. Amuurtani waxay keentay in mudo bil kadib ay ciidamada gumayisga Ethiopia qoomiyad qoomiyad ugu kala baxaan xerada kifladoorka ee magaalada Qabridahare. Dagaal halkaasi ka dhacay dabayaaqadii bishii sagaalaad waxay ciidamada Wayaanuhu isaga dileen in kabadan 60 askari. Waxaa islamarkiiba si dagdag ah ku yimid taliska Hararge ee fadhigiisu yahay Magaalada Harar. Shir ay mudo qaateen saraakiishii ciidamada Wayaanuhu waxay ku danbaysay 37 sarkaal oo 33 kamid ah yihiin qoomiyada Oromada in lagu khaarajiyo kabtaasi 4 ta kalena waxay ka soo kala jeedeen shucuubta koonfuree.
Hawlgalka Cirjiidh mudda yar ka dibba waxa uu noqday mid si buuxda uga fulaya gobalada Doolo, Qoraxay iyo Jarar. Hawlgalkan oo ku salaysnaa abaabul, dhoolatus iyo muquuninta awooda ciidan ee ciidamada gumaysiga ka jooga Ogadenya. 4arta dagaal ee ugu waawaynaa ee lagu soo afjaray hawlgalkii Mulugeeta (Shabag) ayaa bilowday. Dagaalkii ugu horeeyayna waxa uu dhacay 08/08/2006 waxaanu ka dhacay deegaanka Waab ee Goglo. Bartaasi ilaahay kuma cayminin ciidanka gumaysiga Itobiya. Dagaalkan in kabadan 57 askari oo u badnaa qoomiyada Tigrega ayaa lagu dilay tira kale oo kabadan 40 askarina waa lagu dhaawacay saad iyo saanad badana waa lagaga furtay. Dagaalakani waxa uu saamayn balaadhan ku yeeshay cadawga. 3ex maalmood ayaa calanka gumaysiga ee magaalada Qabridahare hoos loo dhigay.
Dagaalkii labaad ayaa ka dhacay 15/08/2006 tuulada Caado. Dagaalkan ayaa ahaa midikii ugu cuslaa ee ay ciidanka gumaysiga Itobiya ka soo waaqsan waayeen. Waxaa dagaalakan ka qayb galay ciidamo gumaysigu uu lahaa oo wakhtigaasi loogu talagalay in ay ka qaybqaataan weerarkii lagu qaaday ururkii Maxkamadaha Islaamiga ee ka ariminayay caasimada Muqdisho iyo inta badan koonfurta dalka Somalia. Ciidamadani waxay dhamaayeen 700 oo askari oo loogu talagalay in ay lug kaga baxaan dalka Ogadenia si ay u sii maraan gobalada dhexe ee Somalia. Ciidamadii
cadadkaasi dhamaa waxa uu ku hakaday hawlgalkoodii gobalka Doolo ee Ogadenia iyagoo hal dhumay iyo hal dhaan raacay laga dhigay.
Dagaalka sadaxaad ayaa ahaa midkii ugu wakhtiga yaraa, uguna saamayntaa balaadhnaa. Wuxuuna ka dhacay deegaanka Isdabadag 19/08/2006. Dagaalkan isagana Alle kuma cayminin ciidamada nacabka ah. Wuxuu ahaa ciidamo uruuris ahaa oo ka soo baxay magaalooyinka Dhagaxbuur, Birqid iyo Garbo halkaas ayaana lagu soo afjaray.
Dagaalka afraad ayaa ahaa midkii ugu wakhtiga dheera waxaanu ka dhacay 22/08/2006 inta u dhaxaysa tuulada Dhadhiin, tuulada Dalaad iyo Kabtinaag oo aan sidaasi uga fogayn magaalada Qabridahare ee xarunta Qoraxay. Dagaalkan ciidnka gumaysiga Ethiopiawaxaa lagaga dilay 47 askari 23 kalena waa lagaga dhaawacay.
Markii qorshihii 1aad ee Cirjiidh sidii loogu talaglay ay u fuleen cadawgiina madaxa lanoqday, talasika guud ee CWXO waxay si toos ah awaamir u siiyeen ciidamada ka hawlgalayay deegaanada ay ku sugnaayeen ciidamadii fulinayay hawlgalka Cirjiidh, waxayna ku amreen in la xoojiyo ciidan ahaan iyo qalab ahaanba ciidamadii fulinayay hawlgalkaasi. Falaadhii aan anigu kamidka ahaa waxaanu fulinay dagaalka ka dhacay tuulooyinka Kabtinaag, Dalaad iyo Dhadhiin, balse wakhtigan waxaanu noqonay ciidan gaadhaya hal urur, waxaananu fadhiisin ka dhiganay tuulada Ceel Ogaadeen.
Sidaas oo kale ayaa meel kasta oo uu joogay madax kamid ah hawlgalkii Cirjiidh waxaa lagu xoojiyay ciidan.
Hadaba mar hadii ay ciidamadii gumaysiga Itobiya ay xaroodeen oo ay fadhiisimadoodii ku laabteen waxay noqotay in ciidan walba oo fulinayay hawlgalkan ay sii wataan hawlgaladoodii iyadoo xooga lasaarayo dhinacyada Abaabulka, Wacyigalinta iyo kobcinta shacbiga Somalida Ogadenia ee la gumaysto. Dhulkii wakhtigaasi aanu marnay ee aanu ilaa iyo bishii 10 aad shacabka dagan tuulooyinka iyo kuwa baadiyaha dagan iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan aan kula kulmaynay waxaa kamid ahaa: Ceel Ogaden, Xudur Eyle, Karoodka, Maracaato, Wabiyar, Dalaad, Kabtinaag, Laas-dhankayre, Jugle, Danbarwayne, Shinniile, Horashagax, Maracaato iyo meela kale oo badan. Dhulkan intii aanu maraynay waxay shacbiga Ogadenia ee ku dhaqani natusayeen sida ay uga go’antahay in ay CWXO lagarab taagnaadaan hiil iyo hooba, iyagoo anay ku xidhnayn taageeradoodu shuruud. Sidoo kalena waxay CWXO iyo bulshada S/Ogadenia ee fahansan xaqiiqada gumaysiga Itobiya isla qireen in ay gacmo wada jira un xaqooda ku goosan karayaan.
Ugu danbayntii 01/10/2006 waxaa la soo gaba-gabeeyay hawlgalkii Cirjiidh. Waxaana ku xigay hawlgalo kale oon ka yareyn Cirjiidh oo waqtiga ku haboon aan idiin soo dayn doono.
Gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan.
QORE/GOOBJOOGE: Shamsadiin Omer (Takhal).